रिचार्जकार्ड कोर्दा नम्बर मेटिएर समस्यामा पर्नुभएको छ ? अब यसरी गर्नुस् समाधान
पौष २ गते, २०७६ बुधवार
18th December, 2019 Wed १६:१८:२७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । कहिलेकाँही रिचार्ज कार्ड कोर्दै गर्दा रिचार्जको नम्बर नै कोरिने गर्दछ । तत्कालै रिचार्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसरी रिचार्ज कोरिएपछि धेरैलाई समस्या पनि पर्दछ । तर, अब त्यसको समस्याबाट छुटकारा मिल्ने गरि टेलिकमले नयाँ व्यवस्था मिलाएको छ ।
नेपाल टेलिकमले रिचार्ज नम्बर कोरिएको खण्डमा पनि बाँकी रहेका नम्बरबाट रिचार्ज गर्न मिल्ने व्यवस्था ल्याएको छ । टेलिकमले जनाएअनुसार त्यस्तो अवस्थामा रिचार्ज नम्बरका कम्तिमा ६ वटा नम्बर भने प्रष्ट हुनुपर्नेछ ।
टेलिकमले जनाएअनुसार टेलिकमको वेभसाईटको माध्यमबाट व्यक्तिले घरमै बसेर कोरिएको रिचार्ज कार्डका ६ वटा नम्बर प्रयोग गरि रिचार्ज गर्न सक्नेछन् ।
कसरी गर्ने ६ वटा नम्बरबाट रिचार्ज ?
नेपाल टेलिकमले जनाएअनुसार कोरिएको रिचार्जकार्डबाट रिचार्जको लागि कम्पनीको वेबसाइटमा गएर पिन रिकभरी गर्न सकिनेछ । त्यसको लागि ग्राहकले कम्पनीको वेभसाइट http://pinrecovery.ntc.net.np/ मा लगअन गर्नुपर्छ । रिचार्ज कार्डमा भएका १६ अंकका पिन नम्बर मध्ये कमसेकम ६ वटा अंक भने प्रष्ट बुझिने हुनुपर्छ ।
यसरी देखिने पिन नम्बरलाई कार्डमा लेखिएको अवस्थामा राख्नुपर्छ र मेटिएको अंकमा ‘*’ चिन्ह राख्नुपर्छ । जस्तो कि पिन नम्बरको फम्र्याट १२३४५६७८९०१२३४५६ छ र बीच बीचका पिन नम्बर मेटिएको वा नबुझिने छ भने त्यही अनुसार १**४५*७८**१२**५* संरचना बमोजिम राख्नुपर्छ ।
यसरी रिचार्ज गर्दा पनि गलत भयो भने बढीमा १० पटकसम्म प्रयास गर्न सकिनेछ । १० पटकभन्दा बढी पटक गलत तरिकाले रिचार्ज गरिए वेबसाइटबाट रिचार्ज नुहेन पनि कम्पनीले जनाएको छ । यदि त्यस्तो भएका ग्राहकले टेलिकमको काउन्टरबाट सेव लिन सक्नेछन् ।
टेलिकमले केहि समयमा नै एसएमएसमार्फत समेत रिचार्ज कार्ड साट्न सकिने व्यवस्था ल्याउन लागेको जनाएको छ ।
रुपन्देहीको जंगलमा महिला र बालिकाको शव फेला